PressReader - Isolezwe: 2019-01-11 - Unxusele abaphila nokukhubazeka
Unxusele abaphila nokukhubazeka
Isolezwe - 2019-01-11 - IZINDABA - LUNGI LANGA
UNGQONGQOSHE wezamaJele, u-Advocate Michael Masutha usenxuse ukuthi zinikwe amathuba okufunda ngezobuchwepheshe izingane ezifunda ezikoleni zabaphila nokukhubazeka.
UMasutha uthe kufanele izingane zithi uma ziyohlwaya imisebenzi kube wukuthi ziqeqeshwe ngokufanele.
Ubekhuluma ngesikhathi ezothula amakhompyutha akwazi ukusetshenziswa abantu abaphila nokukhubazeka okubalwa kukho abangaboni emehlweni, esikoleni sabafundi abaphila nokukhubazeka esiseNtshanga iThembeni.
UMasutha naye ophila nokukhubazeka uthe ngesikhathi esafundela ubumeli ubuchwepheshe bangaleso sikhathi bamsiza kakhulu ezifundweni zakhe.
Uthe wayesebenzisa irekhoda ukuze aqophe izinkulumo zothisha ababemfundisa ukuze akwazi ukufunda.
“Ubuchwepheshe bubalulekile uma kulungiselelwa abafundi ukuze bakwazi ukuphila uma sebengaphandle (kwesikole). Uma ubuka yonke into yenziwa ngobuchwepheshe. Kubalulekile ukuthi abafundi abaphila nokukhubazeka bathole amathuba alinganayo nalabo abangakhubazekile,” kusho uMasutha.
Ngaphandle kokuyisa kubafundi amakhompyutha umnyango wakhe ufike neziboshwa ezihlanze isikole. Lokhu kuyingxenye yohlelo lokuhlumeleliswa kwezimilo. Ezinye zezinto ezenziwe yiziboshwa kube wukulungisa ingadi yesikole, ukugunda utshani, ukupenda ihholo lesikole nokunye.
UMasutha uthe kubalulekile ukuthi iziboshwa zithole ithuba lokusebenzisa amakhono ezisuke ziwafunde ngesikhathi zisavalelwe ejele.
Uthishanhloko wakulesi sikole uMnuz Braam Mouton uthe bayabujabulela ubudlelwane asebebakhe nomnyango kaMasutha. Uthe bese kukaningi bethenjiswa abantu ukuthi bazokwenza izinto ebezigcina ngokungenzeki baze baphelelwa yithemba.
Uthe okwenziwe yilo mnyango nezinye izinkampani ezibasizayo yikhona okwenza isikole sikwazi ukuqhubeka nomsebenzi wokufundisa izingane nokuzinika imfundo esezingeni elifanayo nezezinye izikole.
USihlalo wesigungu esilawula isikole, uMnuz Adrish Nunkumar, uthe banethemba lokuthi amakhompyutha anikelwe wumnyango azoba nomthelela omuhle emfundweni yabafundi bakulesi sikole.
Isithombe: LEON LESTRADE/AFRICAN NEWS AGENCY( ANA )
UNGQONGQOSHE wezamaJele, u-Advocate Michael Masutha ehlola igumbi okufundela kulo abamakhompyutha esikoleni sabaphila nokukhubazeka iThembeni, eNtshanga